Wasaarada Arimaha Dibada oo Sheegtay inay ka Go’an Tahay Soo Celinta Hantida Qaranka
Iyadoo ka hor hadlaysay Baarlamaanka Soomaaliya wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan waxa ay sheegtay in Xukuumada Soomaaliya ay ka go’an tahay soo celinta hantida qaranka Soomaaliyeed.
Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan Wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Xukuumadda Soomaaliya ay guddi baara sababta ka dambeysay in la kireesto safaarada Soomaaliya ee dalka talyaaniga.
Waxa ay sheegtay in sida Baarlamaanka Soomaaliya ay kaga damqadeen sida ay u maqan tahay hantida qaranka Soomaaliyeed ay iyaduna ugu damqatay sida ay sheegtay wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya.
“Waan soo celinayaa dhamaan hantidii qaranka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku maqan waa balan taasi guddi ayaa loo xilsaaray oo aan aniga madax u ahay waana keenaynaa insha Allah”Sidaasi waxaa yiri wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya Marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegtay in mrnaba hantida qaranka Soomaaliyeed ay tahay mid lama taabtaan ah silamarkaana hantida Soomaalia meel kasta oo ay taal lasoo celinayo.
Hadalkaan ayeey ka sheegtay maanta xilli ay ka hor hadlaysay Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ay ka jawaabasyay su’aalo la xiriira sababta safaarada Soomaaliya ee dalka talyaaniga lo kireeyay.